Periscope inogadziridzwa nekuwedzera emission nhoroondo | IPhone nhau
Pasina kupokana, Periscope chishandiso chakapa zvakawanda zvekutaura nezvazvo nguva pfupi yadarika nekuda kwepfungwa nyowani iyo yaunza kune edu mascreen. Iyo ichangobva kugamuchira gadziriso iyo inobvumidza vashandisi kuti vaone nhoroondo yekutepfenyura yemaawa makumi maviri nemana apfuura kubva paprofile yedu kuti vaone zvese nhepfenyuro dzepamoyo uye nhoroondo ichangoburwa yechero chimiro chatinosarudza.Pakati pezvimwe zvinhu zvitsva zvinounzwa natsva, ichi ndicho chinonyanya kukosha.
Iyo yekudzoresa, yakaburitswa pakati-masikati nezuro, zvakare inosanganisira kuchinjisa kuchirongwa chekunyoresa icho chizoita kuti zvive nyore kune vashandisi vatsva kuti vaiwane iyo, pamwe neakawanda akateedzana ezvipenga zvinogadzirisa izvo zvichafadza vashandisi vakavimbika kwazvo vechishandiso. Aya ndiwo mamwe emabasa:
Replay: Tichakwanisa kuona kuburitswa kwakapedzwa mukati menguva yemaawa makumi maviri nemana nenhoroondo nyowani.
Itsva kuyerera pachivande Izvo zvichatibvumidza isu kutumira kune akateedzana chete evashandisi chaivo vatinoda, nekuda kweizvi isu tinofanirwa kudzvanya yekiyi icon tisati tatanga kutepfenyura uye kusarudza watinoda kukoka ku "show".
Iye zvino tinogona cGoverana nhepfenyuro yedu yehupenyu pa Twitter kudzvanya icon yekambani usati watanga kutenderera.
Iko kunyorera kucharatidza vashandisi kuti vatevere zvinoenderana nekuti ndiani isu takawedzera kune yedu Twitter networkTinogona zvakare kunyararidza vashandisi ava kuti tirege kuziviswa pavanenge vachitepfenyura pasirese
Ini ndinoda modhi, kutumira moyo kumushandisi uyo unoratidza chibvumirano chedu nekutenderera kwavo. Kuwanda kwemoyo yatinogashira kuchazotigadzika pabhodhi rekushambadzira.
Aya matsva maficha anoita kuti iyo Periscope application inyanye kubatsira uye kugarisana, iyo inowanikwa muApp Store mahara uye, kutyora mitemo yemusika (zvirinani izvozvi), inoshaya mukati me-app kutenga, iyo inokukoka iwe kuti uishandise.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Periscope inogadziridzwa nekuwedzera emission nhoroondo
Sekuziva kwangu, ini ndanga ndatova nezvose izvozvo kubvira payakabuda ... uye ndave ndichiishandisa kubva pazuva radzakabuda
Sat garcia akadaro
Ndingaite sei kuti ndidzore munhu aitevera uye akakanganisa akamira kutevera. Handisi kuwana chinongedzo chako Ndatenda
Pindura Sab garcia
Iyo iPhone 6 inoramba ichikuvadza Samsung